Israa'iil hadda waxay ogolaatay dalxiisayaasha Ruushka ee wata 2 jabs ee Sputnik V inay soo galaan waddan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Israa'iil hadda waxay ogolaatay dalxiisayaasha Ruushka ee wata 2 jabs ee Sputnik V inay soo galaan waddan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Israel hadda waxay ogolaatay dalxiisayaasha Ruushka ee wata 2 jabs ee Sputnik V inay soo galaan dalka.
Arrimo farsamo iyo sharci ayaa laga helay nidaamka gelitaanka hadda jira ee dalxiisayaasha ajnabiga ah, taas oo macnaheedu yahay inay suurtogal noqon doonto dalxiisayaasha lagu tallaalay Sputnik V inay yimaadaan Israa'iil laga bilaabo Disembar 1, 2021.
Israa'iil waxay siisaa fasax gelitaanka booqdayaasha lagu tallaalay tallaalka COVID-19 ee Ruushku sameeyay.
Dalxiisayaasha si buuxda looga tallaalay Sputnik V ayaa loo oggolaan doonaa inay galaan Israa'iil laga bilaabo Disembar 1.
Tallaalka Ruushka laftiisa waxa aqoonsaday Israel laga bilaabo Noofambar 15, 2021.
Wasaaradaha Caafimaadka iyo Dalxiiska ee Israel iyo xafiiska Ra'iisul wasaaraha Israa'iil War qoraal ah oo ay si wadajir ah u soo saareen maanta, ayaa lagu sheegay in martida ka socota Ruushka, kuwaas oo helay laba xabbadood oo Ruush ah. Sputnik V Tallaalka COVID-19, waxaa loo ogolaan doonaa inuu dalka soo galo laga bilaabo 1da Diseembar.
"Arimaha farsamada iyo sharciga ayaa laga helay nidaamka gelitaanka ee hadda jira ee dalxiisayaasha ajnabiga ah, taas oo macnaheedu yahay inay suurtagal noqon doonto dalxiisayaasha lagu tallaalay Sputnik V inay yimaadaan Israa'iil laga bilaabo Disembar 1, 2021. Markaas, nidaamka isku-dhafka ayaa la dhisi doonaa, sharci ah qaabaynta iyo waajibaadka ayaa la dhammaystiray, iyo habka gelitaanka ayaa u shaqayn doona dhibaato la'aan si loo daryeelo caafimaadka muwaadiniinta Israa'iil iyo dalxiisayaasha, iyaga oo siinaya xaalado raaxo leh iyo khibrad safar oo wacan. Waxaan gaarnay go'aanka ah in Israa'iil ay si rasmi ah u aqoonsan doonto Ruushka Sputnik V Talaalka November 15, 2021," ayaa lagu yiri bayaanka.
“Laba toddobaad ka hor, Israa’iil waxay albaabadeeda u furtay dalxiisayaal lagu tallaalay tallaallada ay WHO aqoonsan tahay. Iyadoo la tixgelinayo tallaalka guusha leh ee dadka reer binu Israa'iil ee leh qiyaasta saddexaad iyo dhacdooyinka hoose ee cudurrada, Ra'iisul Wasaaraha Israel Naftali Bennett, oo ay weheliyaan Wasiirka Caafimaadka Nitzan Horowitz iyo Wasiirka Dalxiiska Yoel Razvozov waxay sameeyeen go'aan ah in meesha laga saaro xayiraado dheeraad ah iyo xuduudaha furan. Dalxiisayaasha laga tallaalay Sputnik V oo helay baaris togan oo ka hortag ah,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Ilaa bishii Maarso 2020, Israa'iil waxay ku dhawaad ​​ka xidhnayd dalxiiska. Gelida dalka waxa ay u suurto gashay oo kaliya muwaadiniinta soo laabanaya ama ajaanibka helay ogolaansho gaar ah. Tan iyo bishii Maajo, iyada oo qayb ka ah barnaamij tijaabo ah, dhawr kooxood oo safarro ajaanib ah oo habaysan ayaa la seexiyay dalka, kuwaas oo si buuxda loogu tallaalay dawooyin uu Maraykanku ansixiyay.
Wasaaradda Dalxiiska ee Israa’iil ayaa bishii April ku dhawaaqday in ay 1-da Luulyo u aragto in ay suurtogal tahay in la bilaabo gelitaanka waddanka dalxiisayaasha laga tallaalay gobollo gaar ah, balse fulinta qorshayaashan ayaa dhowr jeer dib loo dhigay sababo la xiriira. xaalada faafa.
1-dii Noofambar, Israa’iil waxay xuduudaheeda u furtay markii ugu horreysay muddo 20 bilood ah dalxiisayaal ajnabi ah oo ay ku tallaaleen dawooyin ay oggolaatay WHO wax aan ka badnayn lix bilood ka hor, iyadoo lagu xiray shuruudo dhowr ah oo ku saabsan tirada tallaallada iyo kuwa xoojiyayaasha la helay. Ajaanibta buuxisa shuruudahan waa inay sameeyaan tijaabooyin swab 72 saacadood ka hor inta aysan dhoofin oo ay ku go'doomiyaan garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion ee Israa'iil ilaa natiijo xun laga helayo. Si loogu oggolaado Israa'iil, ajaanibta 14 maalmood gudahooda ka hor gelitaanka "ma joogi karaan waddan ka tirsan aagga cas, khatarta faafitaanka coronavirus," ayay wasaaradda caafimaadka tidhi.